Забур 42 CARS - Nnwom 42 AKCB
1 NHOMA A ƐTO SO ABIEN
Koramma “maskil” dwom.
1Sɛnea ɔforote pere hwehwɛ nsuwansuwa no,
saa ara na me kra pere hwehwɛ wo, me Nyankopɔn.
2Onyankopɔn ho sukɔm de me kra, Onyankopɔn teasefo no.
Da bɛn na metumi akohyia Onyankopɔn?
3Me nisu ayɛ mʼaduan
awia ne anadwo,
na da mu nyinaa nnipa bisa me se:
“Wo Nyankopɔn wɔ he?”
4Saa nneɛma yi na mekae
bere a mereka me koma mu nsɛm;
sɛnea na midi asafokuw anim,
na yɛde anigye nteɛteɛmu ne aseda nnwom
nantew yuu bɔ mu kɔ Onyankopɔn fi
wɔ afahyɛ da no.
6Me kra abotow wɔ me mu,
enti mɛkae wo
fi Yordan asase so,
Hermon mmepɔw so, fi Bepɔw Misar so.
7Ebun kɔ bun mu
wɔ wo nsu a ɛworo gu no nnyigyei mu;
abu afa me so.
8Adekyee mu, Awurade kyerɛ nʼadɔe,
adesae mu, ne dwom ba me nkyɛn,
mpae a mebɔ srɛ me nkwa Nyankopɔn.
9Mibisa Onyankopɔn, me Botan no se,
“Adɛn nti na wo werɛ afi me?
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ menantenantew twa adwo,
mʼatamfo nhyɛso nti?”
10Me nnompe te ɔdesani yawdi,
mʼahohiahiafo ateetee nti,
daa nyinaa wobisa me se,
11Me kra, adɛn, na woabotow?
AKCB : Nnwom 42